ညာသန်နဲ့မတူ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဘယ်သန်တွေရဲ့ အချက်တွေ
30 Nov 2017 . 5:17 PM
လောကကြီးမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိတဲ့ ဘယ်သန်တွေက မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆို လွယ်ကူစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ပေမယ့် နေထိုင်တဲ့ လောကကြီးကတော့ ညာသန်တွေများတယ်ဆိုတာ မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သန်တဲ့သူတွေက ညာသန်တွေလိုပဲ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ကတ်ကြေးကိုင်ပြီး အနုပညာမြောက်စွာနဲ့ ဖြောင့်တန်းစွာဖြတ်နိုင်ဖို့က သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်ပါတယ်။
ဘယ်သန်တွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလုပ်ဆောင်ပုံက ညာသန်တွေနဲ့မတူ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် အော်စတင်တက္ကသိုလ်က စိတ္တဗေဒပညာရှင် ပါမာက္ခ ရော်နယ်ယိုက ဘယ်သန်တွေဟာ သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ စောစီးစွာဖြစ်ပေါ်တတ်သလို အခြားသောကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလည်း ညာသန်တွေနဲ့ တူညီမှုမရှိပဲ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေက ဘယ်သန်တွေရဲ့ ထူးခြားမှုဖြစ်နေလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
ဦးနှောက်ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းကို သိပ်အသုံးမပြုကြဘူး
ညာသန်တွေအများစုက သူတို့ဦးနှောက်တွေရဲ့ဘယ်ဘက်အခြမ်းကို ဘာသာစကားတွေသင်ကြားဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ ဘယ်သန်တွေက ညာဘက်ခြမ်းနဲ့ လေ့လာသင်ယူတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသော ညာသန်သောသူတွေနဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသောဘယ်သန်တွေက ညာခြမ်းဦးနှောက်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၃၀ ရာခိုင်းနှုန်းကသာ နှစ်ခြမ်းလုံးကို ညီတူညီမျှ သုံးစွဲကြပါတယ်။ ဘယ်သန်တွေက ညာသန်တွေနဲ့ တူညီစွာဘာသာစကားတွေကို လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။ ဘယ်သန်နဲ့ ညာသန်က များသောအားဖြင့် အရမ်းကိုသိသိသာသာကွဲခြားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဘယ်သန်ညာသန်ကွဲပြားသော်လည်း ဦးနှောက်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်တာ သေချာတဲ့အတွက် ကွဲပြားခြားနားမှုကလည်း ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၂၀၀၅ ခုနစ်ပြင်သစ်လေ့လာရေးက သုတေသနသမာတွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရ လူဦးရေရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသောဘယ်ကျော်တွေဟာ ရှေးကျတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေဖြစ်ကြပြီး ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ရန်လိုပြီးတိုက်ခိုက်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ညာသန်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဘယ်သန်တွေ့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကြီးစိုးတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် ဘယ်သန်တွေက သူတို့ရဲ့ ဘယ်လက်ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းပိုရှိတယ်ဆိုတာကို သုတေသနပညာရှင်တွေက ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်သန်တွေဆိုပြီး အထင်သေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးကို သတိရလ်ိုက်ပါနော်။
တစ်ချို့တွေက ဘယ်သန်တွေဆို အားကစားမှာ ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်မယ်လို့ မထင်တတ်ကြပါဘူး။ အမှန်မှာတော့ ဒီထင်မြင်ယူဆချက်က လုံးဝကိုမှားပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းကစားရတဲ့ တင်းနစ်စ်၊ လက်ဝှေ့ နဲ့ ဘေ့စ်ဘောပစ်ခြင်းတွေမှာ ကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ကြပါတယ်။ ဘာသာဗေပညာရှင် Rik Smit က ဘယ်ရောညာရောသန်တဲ့ အားကစားသမားတွေက များသောအားဖြင့် ညာသန်တဲ့ ပြိုင်ဘက်နဲ့ပဲ လေ့ကျင့်လေ့ရှိတဲ့အတွက် ဘယ်သန်အားကစားသမားနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်သန်တွေအချင်းချင်းအလွယ်တကူကစားနိုင်ပေမယ့် ညာသန်ကစားသမားတွေက အဲအချိန်မှ အခက်ကြုံရပါတယ်။
ဘယ်သန်တွေက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်မှုရှိကြတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနစ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်ဂျာနယ်ထဲမှာဆိုရင် သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရ ဘယ်သန်တွေက ညာသန်သမားတွေထက် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရင်သားကင်ဆာက သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာ ပိုပြီးအဖြစ်များတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘယ်သန်တွေက Preodic Limb Movement Disorder(PLMD) လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်စက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ခြေတွေလက်တွေနဲ့ ကန်တဲ့ပြသာနာမျိူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က Toledo တက္ကသိုလ်စစ်တမ်းများအရ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းသော ညာသန်တွေသာ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ခြေလက်အင်္ဂါနှစ်ဘက်စလုံးက အိပ်စက်နေစဉ်အတွင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုရှိပြီး ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းသော ဘယ်သန်တွေကတော့ အိပ်စက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ညာသန်တွေထက်ကို လှုပ်ရှားမှု ပိုမိုဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ဘယ်သန်ညာသန်ကွဲပြားခြားနားမှုကို အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ အရာဖြစ်တဲ့အပြင် ဒီလိုကွဲခြားမှုကလည်း သိပွံပညာရှင်တွေအတွက်ရော လက်တွေ့ဘဝအတွက်ရော စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အခရာပရိတ်သတ်ကြီးကို ဗဟုသုတရအောင် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ညာသနျနဲ့မတူ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ဘယျသနျတှရေဲ့ အခကျြတှေ
လောကကွီးမှာ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျသာရှိတဲ့ ဘယျသနျတှကေ မညျသညျ့အလုပျကိုမဆို လှယျကူစှာလုပျကိုငျနိုငျပမေယျ့ နထေိုငျတဲ့ လောကကွီးကတော့ ညာသနျတှမြေားတယျဆိုတာ မထေ့ားလို့ မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဘယျသနျတဲ့သူတှကေ ညာသနျတှလေိုပဲ ပစ်စညျးတဈခုခုကို ကတျကွေးကိုငျပွီး အနုပညာမွောကျစှာနဲ့ ဖွောငျ့တနျးစှာဖွတျနိုငျဖို့က သူတို့ရဲ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးပျေါမှာလညျး အမြားကွီးမူတညျပါတယျ။
ဘယျသနျတှရေဲ့ ဦးနှောကျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကလုပျဆောငျပုံက ညာသနျတှနေဲ့မတူ ကှဲပွားခွားနားပါတယျ။ တက်ကဆကျပွညျနယျ အျောစတငျတက်ကသိုလျက စိတ်တဗဒေပညာရှငျ ပါမာက်ခ ရျောနယျယိုက ဘယျသနျတှဟော သန်ဓသေားဖှံ့ဖွိုးမှုတှေ စောစီးစှာဖွဈပျေါတတျသလို အခွားသောကနျြးမာရေးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အကွောငျးအရာတှမှောလညျး ညာသနျတှနေဲ့ တူညီမှုမရှိပဲ ကှဲပွားခွားနားမှုတှေ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဘယျလိုအခကျြတှကေ ဘယျသနျတှရေဲ့ ထူးခွားမှုဖွဈနလေဲဆိုတာ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ။
ဦးနှောကျရဲ့ ညာဘကျခွမျးကို သိပျအသုံးမပွုကွဘူး
ညာသနျတှအေမြားစုက သူတို့ဦးနှောကျတှရေဲ့ဘယျဘကျအခွမျးကို ဘာသာစကားတှသေငျကွားဖို့အတှကျ အသုံးပွုကွပါတယျ။ အဲလိုပွောလို့ ဘယျသနျတှကေ ညာဘကျခွမျးနဲ့ လလေ့ာသငျယူတယျလို့ ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ ၉၈ ရာခိုငျနှုနျးသော ညာသနျသောသူတှနေဲ့ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးသောဘယျသနျတှကေ ညာခွမျးဦးနှောကျကို အသုံးပွုကွပါတယျ။ ၃၀ ရာခိုငျးနှုနျးကသာ နှဈခွမျးလုံးကို ညီတူညီမြှ သုံးစှဲကွပါတယျ။ ဘယျသနျတှကေ ညာသနျတှနေဲ့ တူညီစှာဘာသာစကားတှကေို လလေ့ာနိုငျကွပါတယျ။ ဘယျသနျနဲ့ ညာသနျက မြားသောအားဖွငျ့ အရမျးကိုသိသိသာသာကှဲခွားတာမြိုးမရှိပါဘူး။ ဘယျသနျညာသနျကှဲပွားသျောလညျး ဦးနှောကျကတော့ ဆနျ့ကငျြဘကျမဟုတျတာ သခြောတဲ့အတှကျ ကှဲပွားခွားနားမှုကလညျး ဆနျ့ကငျြဘကျမဖွဈနိုငျပါဘူး။
၂၀၀၅ ခုနဈပွငျသဈလလေ့ာရေးက သုတသေနသမာတှရေဲ့ တှရှေိ့ခကျြအရ လူဦးရရေဲ့ ၃ ရာခိုငျနှုနျးသောဘယျကြျောတှဟော ရှေးကတြဲ့ငွိမျးခမျြးရေးသမားတှဖွေဈကွပွီး ၂၇ ရာခိုငျနှုနျးကတော့ ရနျလိုပွီးတိုကျခိုကျရတာ ဝါသနာပါတဲ့သူတှဖွေဈကွပါတယျ။ ဒီအခကျြဟာ ညာသနျတှနေဲ့ယှဉျရငျ ဘယျသနျတှရေဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအားသာခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ အကွမျးဖကျမှုတှေ ကွီးစိုးတဲ့ နရောတှမှောဆိုရငျ ဘယျသနျတှကေ သူတို့ရဲ့ ဘယျလကျကို အသုံးပွုပွီးတော့ ကာကှယျနိုငျစှမျးပိုရှိတယျဆိုတာကို သုတသေနပညာရှငျတှကေ ဖျောထုတျခဲ့ကွပါတယျ။ ဘယျသနျတှဆေိုပွီး အထငျသေးမယျဆိုရငျတော့ ဒီအခကျြလေးကို သတိရလိုကျပါနျော။
တဈခြို့တှကေ ဘယျသနျတှဆေို အားကစားမှာ ကောငျးကောငျး ကစားနိုငျမယျလို့ မထငျတတျကွပါဘူး။ အမှနျမှာတော့ ဒီထငျမွငျယူဆခကျြက လုံးဝကိုမှားပါတယျ။ တဈဦးတညျးကစားရတဲ့ တငျးနဈဈ၊ လကျဝှေ့ နဲ့ ဘစျေ့ဘောပဈခွငျးတှမှော ကောငျးမှနျစှာကစားနိုငျကွပါတယျ။ ဘာသာဗပေညာရှငျ Rik Smit က ဘယျရောညာရောသနျတဲ့ အားကစားသမားတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ ညာသနျတဲ့ ပွိုငျဘကျနဲ့ပဲ လကေ့ငျြ့လရှေိ့တဲ့အတှကျ ဘယျသနျအားကစားသမားနဲ့တှတေဲ့အခါ ဘယျသနျတှအေခငျြးခငျြးအလှယျတကူကစားနိုငျပမေယျ့ ညာသနျကစားသမားတှကေ အဲအခြိနျမှ အခကျကွုံရပါတယျ။
ဘယျသနျတှကေ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကနျြးမာရေးကိစ်စတှနေဲ့လညျး ဆကျစပျမှုရှိကွတယျ။ ၂၀၀၇ ခုနဈက ထုတျဝခေဲ့တဲ့ ဗွိတိနျဂြာနယျထဲမှာဆိုရငျ သုတသေနပညာရှငျတှရေဲ့ ရှာဖှတှေရှေိ့မှုအရ ဘယျသနျတှကေ ညာသနျသမားတှထေကျ ရငျသားကငျဆာဖွဈနိုငျခြေ ပိုမြားတယျလို့ ရေးသားထားပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ရငျသားကငျဆာက သှေးဆုံးပွီးခြိနျမှာ ပိုပွီးအဖွဈမြားတယျလို့လညျး ဖျောပွထားပါတယျ။
ဘယျသနျတှကေ Preodic Limb Movement Disorder(PLMD) လို့ချေါတဲ့ အိပျစကျနစေဉျအတှငျးမှာ ခွတှေလေကျတှနေဲ့ ကနျတဲ့ပွသာနာမြိူးဖွဈတတျပါတယျ။ ၂၀၁၁ ခုနှဈက Toledo တက်ကသိုလျစဈတမျးမြားအရ ၆၉ ရာခိုငျနှုနျးသော ညာသနျတှသော သူတို့ခန်ဓာကိုယျရှိ ခွလေကျအင်ျဂါနှဈဘကျစလုံးက အိပျစကျနစေဉျအတှငျးမှာ လှုပျရှားမှုရှိပွီး ၉၄ ရာခိုငျနှုနျးသော ဘယျသနျတှကေတော့ အိပျစကျနစေဉျအတှငျးမှာ ညာသနျတှထေကျကို လှုပျရှားမှု ပိုမိုဖွဈပှားတတျပါတယျ။
ဘယျသနျညာသနျကှဲပွားခွားနားမှုကို အလှနျသိမျမှတေဲ့ အရာဖွဈတဲ့အပွငျ ဒီလိုကှဲခွားမှုကလညျး သိပှံပညာရှငျတှအေတှကျရော လကျတှဘေ့ဝအတှကျရော စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ အခကျြတဈခုလညျးဖွဈတဲ့အတှကျ အခရာပရိတျသတျကွီးကို ဗဟုသုတရအောငျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
by Su Yi Htet . 1 day ago
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူများ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရရှိစေဖို့ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းများ
ဂိုဏ်းဖွဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ Rapper Tekashi 6ix9ine
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုကြပါ
ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုကြောင့် Nissan ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌ Carlos Ghosn ဖမ်းဆီးခံရပြီ